> Resource> Utility> Olee otú iji akwagakwa OS ka SSD (Solide State Drive)
Siri ike ala mbanye (SSD) na-aghọ ndị ọzọ na ndị ọzọ na-ewu ewu ruru ka ezigbo ọsọ, ala ike oriri, na kọmpat ụdị ọ na-enye. Ọ bụrụ na ị na-na-na-eme atụmatụ dochie gị convertional disk na chọrọ akwagakwa gị os ka SSD, isiokwu a ga-enye aka.
Olee otú akwagakwa OS ka SSD na obere nsogbu oge na nsogbu?
N'agbanyeghị ma ọ bụrụ na ị chọrọ akwagakwa Windows 7, Vista ma ọ bụ XP gị SSD, ị nwere ike adịghị akpali gị os na ọtụtụ narị gigabytes nke data na otu nnukwu olu site na nanị na-edegharị na pasting. Ọ bụrụ na ike nke gị SSD bụghị ibu karịa ochie HDD, ihe ngwọta kasị mma bụ ikewa sistemụ, na ịrụ a SSD Mbugharị na a pụrụ iche mmekọ na-ike mezue ọrụ a mfe na-adịghị ize ndụ nke data ọnwụ.
N'ihi na pụrụ iche SSD Mbugharị ngwá ọrụ, i nwere ike ịgbalị Wondershare WinSuite 2012, otu nke kasị mma SSD mmepụta oyiri ngwaọrụ. Ọ na-enyere gị nyefee OS ka SSD nile mbụ onye ntọala, na ị na-nwere ike na-gị ngwa ọ bụrụ na ị nwere ihe a chọrọ.
Mgbe wụnye usoro ihe omume na kọmputa gị, na-agba ya na-aga "Disk Management" nhọrọ. Mgbe ahụ ị ga-esi na interface dị ka ndị na.
Iji paghaa OS ka SSD, ị nwere ike họrọ "Mmepụta oyiri One nkebi" ịkwaga nkebi nwere gị os gị SSD. Enen? Mgbe ahụ kụrụ na "mmepụta oyiri Ozugbo nkebi" n'ihu.
Step1. Họrọ isi iyi nkebi
Họrọ disk ebe gị OS dị, na-ahọrọ kpọmkwem nkebi. Mgbe ahụ na-aga "Ekem".
Step2. Họrọ ebe nkebi
Họrọ gị SSD disk na họrọ a nkebi ebe ị na-aga ebe ahụ sistemụ ọ bụrụ na ị kere partitions na ya. Ọ bụrụ na ọ dịghị, họrọ disk. Mgbe ahụ kwaga "Ekem".
Step3. Na-amalite na-akwaga OS ka SSD
Ihe i kwesịrị na-achọpụta bụ na i kwesịrị ndabere data na họrọ lekwasịrị nkebi na gị SSD, ọ bụrụ na e nwere ihe dị mkpa faịlụ. Ma ọ bụghị na ha ga-overwritten n'oge SSD Mbugharị. Wee pịa "Ee", na OS Mbugharị amalite.